Ma jeclaan lahayd inaanan idin jeclayn in ay awoodaan si loo yareeyo tirada qalabka hago qolka qoyskaaga? Hadda aad awoodo. Your TiVo lagu xakameyn karaa by app ah waxaad kala soo bixi kartaa adiga oo iPad ama iPhone. Dhab ahaan Waxaad dooran kartaa inaad kala soo baxdo ka app rasmi ah TiVo, ama waxaad dooran kartaa a app xisbiga labaad. Dadka intooda badan ma noolaan karaan iyaga oo aan smartphone xiriiraan, sidaas sababta aan u dhigayaan, waxa ay u isticmaalaan in, hab cusub oo hal abuur leh? Halkan waxaa ku qoran toban ka mid ah oo kale hogaanka si app TiVo ee iPad iyo iPhone.
Tani xiiso leh in la yidhaahdo app waa lacag la'aan dukaanka Lugood, halkan macaamiisha Guddida Hem si ay u awoodaan in ay isticmaalaan oo ay la qalab TiVo. Waxaad heli kartaa baakadaha aad jeceshahay, iyo xitaa dhameysan daawashada show ah ku saabsan qalabka telefoonada gacanta oo aad u bilaabay si uu u daawado aad TiVo. Waxa kale oo jira adeeg kirada waxaad isticmaali kartaa in xiriir iyo kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato aad app TiVo Togo ilaa iyo 48 saacadood ka dib. The yaqaan TiVo feature raadinta waxaa lagu daray, oo waa sidii kartida ay ku degsadaan cajalado iyo maarayn goobaha taxanaha. Markaas dabcan, marka aad guriga joogto oo aad telefoonka ku xiran shabakada wireless, waxa uu noqonayaa mid aad u hago, halkaas oo aad ka bedeli kartaa channel ah, si degdeg ah weeraryahanka, ama toggle in ay ku noolaadaan TV.
App Tani free daabacay mid ka mid ah hore ugu dheer waarta oo bixiya internet siinaysaa aad u heshid TiVo aan la isticmaalayo fog caadiga ah. Waxa aad ka heli Lugood Apple Store ee halkan . Dhibcaha Waxaa aad la isticmaala ay fududaato in la isticmaalo iyo faaiidada. Waxaad ka raadin kartaa hagaha laga tiro ka mid ah ilaha ay ka mid yihiin Hulu, Lugood, iyo Netflix; cajalado jadwalka aad TiVo; iyo qaar ka mid ah cilmi baaris ku sameeyaan actor aad jeceshahay ama in ka badan oo ku saabsan dhacdo dhab ah nolosha u waxyoonay sheekada ay helaan Wikipedia iyo IMDb bartaan. Waxaad xitaa ka heli kartaa xisaabtaada Netflix iyo dar movies oo dheeraad ah si aad safka.
Sida aad waana Beenaalayaal laga yaabaa in ay i ee horyaalka, tani waxaa si gaar ah loogu talagalay macruufka Apple ah. Waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah ee halkan . Sida laga soo xigtay Apple, app tani waa ay download sare ee qaybta tilmaan-TV. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad aragto waxa laga heli karo dhowr adeegyada geeyo sida Hulu, Netflix, iyo Lugood, oo lagu daray aad wax dheeraad ah oo ku saabsan jilayaasha ama ay muujinayso ku IMDb iyo Wikipedia baran karaan. Wixii Maraykanka iyo Kanada users, waxa aad heli kartaa hage liiska TV maxali ah, sidoo kale. Sidaas, in qoyaysas badan oo aan loo eegayn waxa isha TV adeeg aad qabto iyada oo aad TiVo, waxaad yeelan doontaa in ay helaan xogta.
4. looska Plus Remote & keyboard u DVR TiVo
Tani waa version premium ee app kale waxaan raadin doonaa in daqiiqad ah. Waa la heli karaa lacag ka dukaanka Lugood ee halkan . Waxayna u shaqaysaa iyadoo ay iPad iyo iPhone labadaba, oo ay timaaddo la taageero casriga ah waa in aad u baahan tahay wax caawimaad ah. Tan iyo markii ay tani tahay version bixiyo, waxaad ma arki doono xayeysiis kasta. Waxaad heli kartaa ugu cadcad by kabacdi tagay. Haddii aad isku shaandheyn qalab aad, aad u yeelan doontaa in ay kor u keyboard oo buuxa, taas oo ka dhigi doonaa galaya macluumaad badan ka sahlan. Waxaa sidoo kale ku xidhi kartaa adeegga la xidhiidha Apple Bonjour ama ay u fidinno xiriir gacanta. Looska ma awoodo in uu sameeyo wax kasta oo gacanta ku TV, si kastaba ha ahaatee, sida mugga. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa in taxane TiVo 3 ama ka dib version ah.
5. looska Remote & keyboard u DVR TiVo
Tani waa version xorta ah ee app looska ah. Waxaa laga heli karaa dukaanka Lugood ee halkan . Tan iyo waa bilaash ah, waxa aanu la iman xayeysiis, laakiin dadka isticmaala ayaa iyaga lagu qiimeeyo sida aan dhiba. Waxa ay u muuqataa wax badan oo la mid ah TiVo fog dhabta ah, oo lagu daray sida version bixiyo, haddii aad isku beddesha qalabka, waxa aad heli kartaa keyboard ah ee laga soo galo si fudud baadhitaannada. Sida version ku bixisay, waxa ay xirmaan karaa iyadoo la isticmaalayo Bonjour ama gacanta by dejinta lambarka dekedda. Sidoo kale ma xakameeyo TV. Hubi in aad awood aad TiVo in ay isticmaalaan Network Remotes sidaasay ahaan doontaa dhaba awoodaan in ay isticmaalaan qalab Apple iyo app.
App Tani lacag la'aan ah, marka la qalab iWavit ku soo aadeen, ha doonaa qalab la qaadi karo Apple noqon fog TiVo ah model jilitaankii. Waxaad ku soo bixi karaa halkan . Waxaad u baahan doontaa in aan bilowno app ugu horeysay, ka dibna ku soo lifaaq qalab iWavit ah. Ka dib markii in, ay u shaqayso sida fog TiVo la, badhamada fududahay in la arko oo weyn. Waxaad samayn kartaa waxa ay eegi 3D by kabacdi ka bidix ilaa midig. Waxaa shaashadda dhalaalaysa shiday, sidaas xitaa haddii aad leedahay nalalka off for khibrad run shineemo, waxaad yeelan doontaa in ay arkaan app. Waxaa jira ah lifaaqa IR optional u iWavit u oggolaanaysa in aad isticmaasho feature IR ka ilaa 300 oo feet. Waxa kale oo la qorsheeyay in ay la tacaalaan kartaa dhammaan qalabka tiyaatarka gurigaaga.
TV taageerayaasha British la TiVos soo bixi kartaa app ah nidaamyada ay, sidoo kale. Waa app si xor ah halkan . Waxaad ka arki kartaa ilaa intii toddoba maalmood ah mar, cajalado dhigay fog aad TiVo, iyo wadaagaan on your site warbaahinta bulshada jecel, oo dhan ka app la mid ah. Waxaa u shaqeeya Freesat, Freeview, Sky, iyo nidaamyada Virgin Media. Waxaad astaysto liiska ay u vertical ama gudban laga rogo, doorashadaada. Haddii aad ka heli show ku saabsan liiska Sky ama Virgin Media TV, waxaad riixi kartaa batoonka ah in ay u oggolaadaan show in si aad u bilowdo diiwaan isla markiiba. Bandhigyada qaarkood waxay leeyihiin logo Lugood iyaga dhinac socday, oo sidaas daraaddeed waxaad riixi kartaa inaad kala soo baxdo show in isla markiiba.
App Tani ma aha lacag la'aan ah, laakiin aad u hesho wax badan oo xoog u lacagtaada. Waxaa laga heli karaa halkan . Waxay ka shaqaysaa in ka badan network wifi ku saabsan TiVo taxane 3 ama sanduuqa ka dib si ay u jeedi iPhone ama iPod Touch galay fog ah. TiMote helo niinasaa sida degdeg ah oo ajiibaa waa, oo lagu daray sida ay u fududahay waa in ay isticmaalaan. Si ka duwan dadka kale qaar ka mid ah halkaas oo aad leedahay ilaa barnaamaj Ciwaanka IP: ga ee TiVo galay qalabka, waxaad u isticmaali kartaa si toos ah u heli iyo bilaabin isticmaalka aad Tivo. Fursada keyboard u inputting shuruudaha raadinta sidoo kale waxaa laga heli karaa app this. Waxaad samayn kartaa liiska ugu cadcad iyo u arkaan waxaad aragtaan qalabka mobile.
Iyadoo app tani ma aha lacag la'aan ah, waxaa hubaal waa mid ka mid ah barnaamijyadooda qiimaha ugu hooseeya aad ka heli karto, iyo wax badan ka yar qaalisan fog labaad uu noqon lahaa waa. Waxaad ku soo bixi karaa halkan . Waxayna u shaqaysaa iyadoo taxane TiVo 3 ama lagu daydo jilitaankii. DVR Remote aad muujin kartid waxa ciyaarayaa si aad iyo sidoo kale xakamayso TiVo. Weerar degdeg helaa keyboard ah u baadhi fudud. Waxay ka shaqaysaa in ka badan wifi oo si toos ah lagu ogaan karaa in aad TiVo si ka taagay waa neecaw. Kaliya u hubso inaad u sheegtid TiVo in ay aqbalaan Network kontoroolha Remote. Waxaad samayn kartaa liiska ugu cadcad ah in ay si fudud u heli channels aad ugu jeceshahay.
Logitech waa mid ka mid ah hogaanka saarayaasha qalab laga soo galo la qaadi karo ee adduunka ee, samaynta jiir, teebabka, iyo remotes. Haddaba iyagu waxay bixiyaan app xor ah dukaanka Lugood, halkan , in uu helo calaamadaha sare oo sida ay u fududahay waa in ay isticmaalaan. Waxaad u baahan doontaa in a unit Harmony Link, laakiin in, aad iPad ama iPhone noqdo fog multi-shaqayn. Waxaad ka arki kartaa hagaha barnaamijyada, tuubada button Watch Hadda si aad u daawato show ah, ama barnaamijka aad TiVo. Waxa kale oo aad qaadi karto si filim ama bilaabi il music aad u. Harmony Link waxaa ku jiri doona doorasho IR ah si aad u shaqeyn karaan dhammaan sanduuqyada madadaalada guriga oo aan haysan si ay u dhawrto albaabbada unit madadaalo u furan.
> Resource > iPhone > Top 10 Beddelka TiVo App u iPad iyo iPhone